Mety hadinon'i Apple ny sarontava ao amin'ny Apple Store amin'ity herinandro ity | Avy amin'ny mac aho
Araka ny Bloomberg, hijanona i Apple mitaky sarontava amin'ny fivarotana sy birao isan-karazany manomboka amin'ity herinandro ity ho an'ny mpanjifa. Ny famoahana dia manambara fa i Apple dia efa nampahafantatra ny mpiasan'ny fivarotana sy ny orinasa an'ity fanovana ity ary tsy hotakiana amin'ny olona tonga tsy misaron-tava izy ireo raha efa nanao vaksiny.
Io fanovana io dia tsy misy fiantraikany amin'ny mpanjifa mitsidika ny Apple Store ihany, satria lMbola mila manao sarontava ihany ireo mpiasa. Ao amin'ny publication Bloomberg dia nanamafy izy fa io fanovana io dia hatao rahampitso talata, araka ny memoara nahazoana ity mpampita vaovao ity.
Nanomboka nampahafantatra ireo mpiasa amin'ny antsinjarany ny fiovana eo amin'ny tsena voakasik'izany ny goavambe teknolojia, araka ny filazan'ny olona manam-pahalalana momba an'io raharaha io, izay tsy nety notondroina anarana rehefa niresaka ny fanovana politika mbola tsy nambara. Manomboka amin'ny talata izao ny fanovana, ary nampandrenesina ireo mpiasa fa tsy hotakiana amin'ny mpanjifa izy ireo hanamarina ny vaksininy.
Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny biraon'ny Apple, ny orinasa dia mieritreritra ny hanafoana ny sasany amin'ireo biraon'ny orinasa misy azy ny filana mampiasa sarontava, ao anatin'io memoara io ihany, memoara iray miresaka ny olana amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina amin'ny birao.
Noho ny fandrosoana natao ho valin'ny Covid-19 any Etazonia, dia tianay hampahafantatra anao fa tranonkala marobe no miroso amin'ny dingana manaraka ary hanomboka hiasa eo ambanin'ny protokol Phase 3 ao amin'ilay tranokala. Ao amin'ny dingana faha-3, raha avela, dia havaozina ny paikadin'i Apple mba hahafahana misaron-tava ny olona vita vaksiny. Ny fepetra takiana amin'ny halavirana ara-batana koa dia miala sasatra amin'ity dingana ity.
Amin'ity fepetra ity, Apple noho izany dia miditra lisitra lava an'ny orinasa Etazonia izay nanambara ny fanovana ny politikan'ny sarontava azy ireo noho ny fandrosoana amin'ny vaksiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mety hadinon'i Apple ny sarontava ao amin'ny Apple Store amin'ity herinandro ity